Huawei Nova 3: Famaritana, vidiny ary fanombohana ofisialy | Androidsis
Huawei Nova 3: haavo antonony premium vaovao an'ny Huawei
Eder Ferreño | | Huawei, Finday
Rehefa afaka herinandro vitsivitsy niaraka tamin'ny tsaho vitsivitsy, dia efa afaka nahafantatra ny Huawei Nova 3 vaovao isika. Ny fandrosoana ny telefaona dia efa nandroso, noho izany dia efa afaka mahafantatra ny antsipiriany rehetra momba ny telefaona vaovao avy amin'ny mpanamboatra sinoa isika. Izy io dia maodely iray mahatratra ny taha maherin'ny premium an'ny mpanamboatra. Ka mihoatra ny mahafeno ny masontsivana.
Ny Huawei Nova 3 dia miray amin'ny lamaody, izay nanjary zavatra mahazatra indrindra amin'ny telefaona marika Sinoa. Tsy mahagaga izany, na dia mety maro aza ireo mpampiasa tsy resy lahatra.
Ny Huawei Nova 3 dia mandresy lahatra amin'ny lafiny manokana. Misongadina ny safidin'ny mpikirakira, satria manana processeur matanjaka indrindra ao Huawei izy, koa mampanantena hanome fahombiazana lehibe ho an'ireo mpampiasa hampiasa azy io. Ireo no famaritana feno momba ilay fitaovana:
Screen: 6,3 santimetatra miaraka amin'ny vahaolana FullHD + LCD miaraka amin'ny tahan'ny 19,5: 9
processeur: Kirin 970
fitehirizana: 64/128 GB (azo velarina hatramin'ny 256 GB miaraka amin'ny microSD)
Fakan-tsary Rear: 16 + 24 MP miaraka amina aperture f / 1.8, PDAF misy flash LED
Fakan-tsary eo aloha: MP MP + 24 + 2 miaraka amin'ny vavahady f / 2.0
bateria: 3.750 mAh
Rafitra fandidiana: Android 8.1 Oreo miaraka amin'ny EMUI 8.2 ho toy ny sosona fanaingoana
lafiny: 157 × 73.7 × 7.3 mm
lanja: 166 grama
ny hafa: USB karazana C, sensor Fingerprint, DUAL, 4G, Bluetooth 4.2, 3D Qmoji
Araka ny efa nolazainay taminao, Miavaka amin'ny heriny ity Huawei Nova 3 ity. Satria ny finday dia manana processeur matanjaka indrindra ao anatin'ny marika misy azy. Ankoatr'izay dia efa miaraka amin'ny GPU Turbo ho fenitra, fampiasa izay ampidirina amina finday mpanamboatra sinoa izao. Ho fanampin'izany, manana faharanitan-tsaina artifisialy isika amin'ny telefaona, izay mampanantena fa hanampy ireo fakantsary amin'ilay fitaovana.
Amin'ity lafiny ity, ny Huawei Nova 3 dia tsy diso fanantenana ihany koa, izay miloka amin'ny fakantsary efatra total. Ka afaka manantena zavatra be dia be avy amin'ny fitaovana amin'ity lafiny ity isika. Ny faharanitan-tsaina artifisialy dia hanampy ny telefaona hamantatra ny seho amin'ny fotoana rehetra, ka ny maody mety indrindra dia hofidiana arakaraka ny toe-javatra. Manana ny fanekena ny tarehy ihany koa izahay, izay ampiasain'ny AI indray.
Mikasika ny rafitra miasa, Izy io dia efa tonga miaraka amin'ny kinova farany an'ny rafitra fiasa, Android 8.1 Oreo. Ho fanampin'ny fananana ny kinova vaovao an'ny sosona fanaingoana ny marika sinoa. Ity dia EMUI 8.2, izay fiovana lehibe ho an'ny marika sinoa.
Ny Huawei Nova 3 dia antenaina hanomboka any Chine amin'ity zoma 20 Jolay ity. Momba ny vidiny, Voamarina fa vidiny 2.999 Yuan amin'ny kinova 6GB sy 128GB. Manodidina ny 380 euro ny fiovana. Na dia azo inoana aza fa ho lafo kokoa ny vidin'ny telefaona amin'ny fandefasana azy any Eropa. Saingy amin'izao fotoana izao dia tsy manana fampahalalana momba ny vidin'ny telefaona izahay.
Fantatray fa havoaka amin'ny loko isan-karazany eny an-tsena izy io. Afaka mividy azy amin'ny loko manga, volamena, mainty ary volomparasy ny mpampiasa. Manantena izahay fa hanana fampahalalana bebe kokoa momba ny daty fandefasana azy any Eropa atsy ho atsy. Ahoana ny hevitrao momba ny telefaona Huawei vaovao?
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Huawei Nova 3: haavo antonony premium vaovao an'ny Huawei
Candela Cuevas dia hoy izy:
Salama, Candela no anarako, te hahalala raha fantatrao raha hanomboka any Espana amin'ny taona 3 ny fitaovana huawei nova 2018 na efa amin'ny 2019.
Misaotra tamin'ny famakiana ny hevitro, fiarahabana mafana.
Valiny tamin'i Candela Cuevas
Ny Sony Xperia XZ3 dia mivoaka alohan'ny fampisehoana azy
Afindra ny taila hanefy ny baolina amin'ny lafiny iray amin'ny Portal Drop